Al Shabaab oo afduubtay xubno ka mid ah Guddiga ololaha doorashada Madaxweyne Uhuru Kenyatta | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Al Shabaab oo afduubtay xubno ka mid ah Guddiga ololaha doorashada Madaxweyne Uhuru Kenyatta
Baladweyne(HNN) Ururka Al shabaab ayaa afduubtay gaari ay laa socdeen Koox ka mid aheyd Guddiga ololaha doorashada Xisbiga Jubilee ee Madaxweyne Uhuru Kenyatta kuwaaso laga qafaashay magaalada Mandhera ee Gobolka waqooyi bari Kenya.
Al-Shabaab ayaa la sheegay inay ka afduubteen gaarigan waqooyiga magaalada Manhera, waxaana la tuhmayaa inay la aadeen dhanka Soomaaliya.
Taliyaha Booliska ee waqooyiga Mandhera Charles Chacha ayaa sheegay in afduubkan uu dhacay maalinimadii shalay, ayna ka shakisan yihiin inay ka dambeeyaan Al-Shabaab.
Ciidamada Booliska ayaa wada howl gallo ay ku baadigoobayaan gaariga la qafaashay ka wada xuduuda Soomaaliya iyo Kenya, waxaana laga cabsi qabaa in gaarigaas lala aaday gudaha Soomaaliya.
Al-Shabaab ayaa uga digtay dadweynaha Kenya inay ka qeyb qaataan doorashada madaxtinimada dalka Kenya, waxaana muuqaal ay soo saartay Kooxda oo ka soo muuqday dagaalyahano ku lahdlayay luqadaha looga hadlo Kenya ay ugaga digayeen dadka inay doorashada ka qeyb galaan.
Bisha soo socota ee Agosto ayaa lagu wadaa inay dalka Kenya ka dhacdo doorashada Madaxtinimada Kenya oo sanadkan ah mid xiiso leh, ayna ku tartamayaan Musharaxiinta kala ah Uhuru Kenyatta oo mar kale doonaya inuu ku guuleysto xilka iyo Raila Odinga oo sanadkii 2013 looga adkaaday doorashadii dhacday.